Momba anay - Shandong Huashili Automation Technology Co., Ltd.
Shandong Huashili Automation Technology Co., Ltd. miorina ao an-tanànan'i Rizhao, izay manisy labozia fitaratra mandeha ho azy manan-tsaina sy manapaka ny milina rehetra, masinina fanapahana fitaratra mandeha ho azy, milina fanapahana multi-antsy NC automatique, tsipika fivoriambe manapaka fitaratra mandeha ho azy, milina fanoratana fitaratra mandeha ho azy, milina fanapahana vato voapaika mandeha ho azy ary milina fitotoana fitaratra.
Huashili teknolojia dia andiam-pikarohana mekanika automatique sy fampandrosoana, fanamboarana, varotra amin'ny iray amin'ireo orinasa mpamokatra teknolojia avo lenta. Ny orinasa dia manan-karena traikefa famokarana fitaovana mandeha ho azy mekanika, fahaizan'ny famokarana, haavo teknolojia ary tanjaka ara-toekarena feno eo amin'ny sehatry ny indostria eo alohan'ny indostrialy anatiny, ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fitaovana mandeha ho azy manan-tsaina, ny fifehezana ny fitaovana, ny fahombiazan'ny fitaovana ary ny maodely efa tany. ny ambaratonga voalohany eto an-toerana, teknika maromaro. nameno ny banga anatiny. Ny tsara aorian'ny - serivisy fivarotana sy ny vidiny mirary, mandritra ny fotoana ela mba hahazoan'ny mpanjifa fiderana. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny "finoana tsara aloha, fahafaham-po ny mpanjifa", ny orinasanay dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasa maro.
Ny fitaovam-pamokaran'ny orinasanay dia manana ny toetrany tsara kalitao, avo lenta, faritra gorodona kely, azo ovaina, kely ny fampiasam-bola, vokany haingana sns, izay vokatra tsara ho an'ny indostrian'ny fanodinana fitaratra.
Miarahaba anao izahay hitsidika sy hifampiraharaha aminay.
Miorina amin'ny fitsipiky ny 'fahamendrehana voalohany, fahafaham-po ny mpanjifa', ny orinasanay dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasa maro. Miditra amin'ny 2020, ny orinasa dia niditra drafitra dimy taona vaovao ary dingana iray manakaiky kokoa ny lasa marika manan-danja eo amin'ny sehatry ny famokarana manan-tsaina. Misokatra misimisy kokoa ny orinasa stratejika an'ny orinasa, mavitrika kokoa ny fanavaozana ny teknolojia, voadio kokoa ny fitantanana ny famokarana, ary voarindra sy mahomby kokoa ny asa aman-draharaha. Ny olona Huashili dia hihaona fotoana vaovao sy fanamby amin'ny saina miabo sy misokatra. Ny orinasa dia mandray ny fanovana ny teknolojia hatrany amin'ny famokarana ho iraka ampanaovina azy ary miezaka mafy mandritry ny fiainana hanampiana ny fampandrosoana ara-toekarena an'i Shina.